wararka maanta-arlaadii.net » XOG :–Shirkada SomOil oo dabada ka riixaysa Dagaalka Raisal Wasaare Kheyre ku qaaday Maamulka Galmudug
XOG :–Shirkada SomOil oo dabada ka riixaysa Dagaalka Raisal Wasaare Kheyre ku qaaday Maamulka Galmudug
Waxaa maalmihii dambe socdo ololihii ugu weynaa ee lagu doonayey in meesha looga saaro dhammaan Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ka jiro, wuxuuna ololahaas kasoo bilowday Hirshabelle oo lagu guuleystay iyo Galmudug oo hadda meel xasaasi ah mareyso. Haddaba baaritaan iyo xog wareysi dheer kadib waxaa lasoo ogaaday halka ay sheekada ka socoto iyo ujeedka ka dambeeyo. Qorshahaan oo ah mid ay ka dambeyso dano siyaasadeed oo gaar ayaa waxaa wado Shirkadda Som Oil oo arrintaan usoo martay Ra’isulwasaare Kheyre oo markii hore u ahaa Agaasimaheeda Bariga Africa ka hor inta uusan noqon Ra’isulwasaaraha Soomaaliya.
Raisal Wasaare Xasan Cali Kheyre Shirkadda Som Oil ayaa dooneyso inay Soomaaliya ka qodo shidaal si meeshaas looga helo dhaqaale badan, waxayna arrintaas kala hadashay Ra’isulwaasare Kheyre, waxaana ugu dambeyntii lagu heshiiyey in mashruucan la galo isla markaasna sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgeliyo.
Shirkadda Som Oil ayaa talo ahaan usoo jeedisay inaysan macquul aheyn in Soomaaliya shidaal laga soo saaro inta ay jiraan madaxda Maamul Goboleedyada dalka kuwaas oo ku xiran wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo iyagana wato qorshe kale oo shidaal qodis ah. Maadaama meelaha ugu badan ee shidaalka laga qodi lahaa ay ka taliyaan Maamul Goboleedyada,
Waxaa Xafiiska Ra’isulwasaaraha Soomaaliya bil ka hor ku shiray Madaxda ugu sareyso shirkadda Som Oil and Gas, waxaana la isku soo hadal qaaday qaabka ugu wanaagsan ee mashruucaan loo hirgelin karo. Waxaa kamid ahaa qodobada shirkaas kasoo baxay
4) in Som Oil ay bixiso lacago dheeri ah haddii uu dagaalka waqti badan qaato lacag badan uu u baahdo. Haddaba Kheyre oo garab ka helaya Som Oil ayaa dab ka dhex shiday madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda dhexe taasoo laga yaabo inay horseedo burburka dowladda iyo inay shacabka niyad jabaan.
By: Maxamed Cali Faarax
Xildhibaan C/rashiid Xidig : – “Taliska M/weyne Farmaajo waxaa ka muuqata waayo aragnimo la’aan iyo Talo xumo.
Maamul Goboleedyada Oo Qaadacay Ka Qeybgalka Shirweyne Looga Arinsanayo Dastuurka Bari Ka Dhacaya Muqdisho